साहित्य | Ekhabaronline.com
प्रेमका प्रेमिल गजलः मन बुझ्दैन तस्वीर अगाडि राखेर…….
१. गजल अमृत लुकायौ पिउनलाई, जहर आएन । तिमीलाई माया गर्छु भन्ने अवसर आएन । पीडा यतिसम्म बुझिनसक्नु छ के सुनाउनु, ओरालो लाग्यो जिन्दगी तर समथर आएन । अब यी गरिबहरु भोक भोकै मर्नेछन् पक्कै, खेत [पूरा पढ्नुहोस्]
दीप दर्शनका केही गजलः खतराहरुलाई पनि खतराबाटै खतरा….
१. गजल खतराहरुलाई पनि खतराबाटै खतरा छ । जस्तो कि चराहरुलाई चराबाटै खतरा छ । आगोले जलाउने डर, हुरीले उडाउने डर, बिचरा गरिबहरुलाई टहराबाटै खतरा छ । कोपिला बनि रहन प्रकृतिले दिँदै दिँदैन, फूल [पूरा पढ्नुहोस्]
पहल असिमका केही दम्दार गजल
१. गजल सिँगो नदि बनिदिन्छ टिलपिल भएर । आँसु नबग्नुपर्ने परेलीको डिल भएर । गुलाब पनि काँडा छिचोलेर फुलेको हो, किन डराउनु एउटा सफर मुस्किल भएर । तिमी बस्यौ भने दुस्मन बसेझैँ लाग्छ, त्यही मनमा [पूरा पढ्नुहोस्]
महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको १०८ औँ जन्मजयन्ती आज विविध कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइयो । नयाँबस्ती युवा क्लबले जोरपाटीस्थित महाकवि देवकोटाको प्रतिमास्थलमा माल्यार्पण गरी [पूरा पढ्नुहोस्]
एजेन्सी – नोबेल पुरस्कारलाई विश्वकै प्रतिष्ठित पुरस्कारको रुपमा लिइन्छ । धेरै मानिसको मनमा जिज्ञासा उठ्न सक्छ, कसले र कहिले यो पुरस्कारको स्थापना गरे भनेर । यो पुरस्कार स्वीडिस [पूरा पढ्नुहोस्]
पानी फलाम साह्रो छ, सुगठित छ, त्यसैले हो कि त्यसमा पानी छ । आगो राप हो, राप नै हो प्रकाशको झोल । र त म भन्छु – आगोमा पानी छ । पानीमा आगो छ, आगोमा पानी, दुबैको सन्तुलनमा ब्रम्हाण्ड अडेको छ । पानी [पूरा पढ्नुहोस्]
महाकाव्यकार मनिराज जोशीका छोरा गोविन्दराजले स्थापना गरेको ‘मनिराज वाङ्मय पुरस्कार‘ राष्ट्रकवि माधव घिमिरेलाई प्रदान गरिने भएको छ । नेपाली साहित्य तथा संस्कृति प्रतिष्ठान गोदावरी [पूरा पढ्नुहोस्]
गजल १. जब मेरो बास भट्टिकै आसपास बनी दियो । साहारा त्यही दिन देखि गिलास बनी दियो । फुल चुडिए पछि धर्ती बिछ्यौना बनी रह्यो, डस्न पनि हरेक रातमा आकास बनी दियो । यस्तो बनि दियो मेरो, जिन्दगी एकै [पूरा पढ्नुहोस्]
गजल काल्पनिक जीवन रेखा मेरो मेटि दिएछौ । जन्मेको छैटौ दिनमा मलाई रेटि दिएछौ । म दुख सुख को संग आज बिसाएर बसौ, उति खेरै मेरो भागको फल चपेटी दिएछौ । विचरा भगवान बाँस गर्थ्यो होला जीवनमा, भाविको [पूरा पढ्नुहोस्]
यस वर्षको मदन पुरस्कार घनश्यामलाई
काठमाण्डौं – यस वर्षको मदन पुरस्कार घनश्याम कँडेलको धृतराष्ट्रले पाएको छ । आज बसेको मदन पुरस्कार गुठीको बैठकले अन्तिममा छानिएका ९ कृतिमध्ये कँडेलको कृतिलाई उत्कृष्ट ठहर्‍याएको हो । [पूरा पढ्नुहोस्]